Kulan caawa Xarunta Madaxtooyada uga socda Madaxweynaha cusub, Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo Madaxweynihii hore. - iftineducation.com
Kulan caawa Xarunta Madaxtooyada uga socda Madaxweynaha cusub, Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo Madaxweynihii hore.
aadan21 / September 12, 2012
iftineducation.com – Kadib 24-saac markii ay ka soo wareegatay doorashada Madaxweynaha cusub ee Baarlamaanka ayaa waxaa xilligan Xarunta Madaxtooyada ka socda kulan saddex geesood ay leeyihiin Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed, Gudoomiyaha Baarlamaanka Prof. Jawaari iyo Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud.
Sida ay sheegayaan ilo wareedyo ku sugan Madaxtooyada oo Jowhar.com soo xigatay, kulankan ayaa ah mid albaabada u xiran, kaasoo la filayo in war laga soo saaro marka uu soo dhamaado, waana kulankii u horeeyay ee Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la qaato Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo ninka uu ka guuleystay Shariif Sheekh Axmed.
Wararka ayaa sheegaya in kulanka warbixin la isku dhaafsanayo, gaar ahaan dhinacyada ammaanka iyo arrimaha siyaasada oo ay ka mid tahay howlaha hor-yaala Xukuumada cusub ee la soo dhisayo, sidii ay u ambaqaadi laheyd waxyaabihii Xukuumada ka tagtay.
Kulankan gaarka ah ayaa waxaa wehliya kulan kale oo ammaanka looga hadli doono, kaasoo ay qaadan doonaan Hey’adaha Ammaanka dowladda iyo Saraakiisha AMISOM, iyadoo ay si wada jir ah uga qeyb geli doonaan Madaxweynaha cusub iyo Madaxweynihii hore.
Madaxweynaha cusub Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kulamo qaabilaad kula qaatay Hotelka cusub ee Jazeera Diblomaasiyiin Caalami, siyaasiyiinta Soomaalida, Musharaxiintii hore, Xildhibaano iyo Ururada Bulshada rayidka ah.
Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la wareego Madaxtooyada Villa Soomaaliya, marka ay dhacdo Xaflada lagu caleema saari doono oo lagu wado inay ka soo qeyb galaan Mas’uuliyiin ka socota Beesha Caalamka.
Wiil Soomaali ah oo xulka Qaranka Norway looga gacan haatiyay & Jaraaidyada dalka Norway oo arintaan wax ka qoray (Akhri warka oo Tarjuman+Sawiro)
Aqriso Magacyada iyo Da’da 10-ka Haween ee Dunida ugu Awooda iyo saameynta Badan ee Sanadkan